Global Voices teny Malagasy » Nisokatra ny fisoratana anarana tamin’ny loka ‘Best of the Blogs’ (Bilaogy Tsara Indrindra) · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Septambra 2018 23:34 GMT 1	 · Mpanoratra Diego Casaes Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Eoropa Andrefana, Alemaina, Fiteny, Hevitra, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina
Lasa mpanentana lehibe sy loharanom-baovao ihany koa amin'ny fanovàna ara-tsosialy sy ara-politika any amin'ny faritra maro manerana izao tontolo izao ny famahanana bilaogy. Eto amin'ny Global Voices, mamoaka ny sasany amin'ny feon'ireo bilaogera ireo izahay ary mandika izany amin'ny fiteny maro samihafa. Ny hampiroborobo ny fomba fijery maro samihafa sy ny aingam-panahy no tanjona fototra ao amin'ny vondrom-piarahamonina. Noho izany antony izany no hanohananay ny hetsika toy ny loka Best of the Blogs  .
Tamin'ny 7 Desambra 2009, nikarakara ny fifaninanana iraisam-pirenena fanao isan-taona fahaenina amin'ny loka Bilaogy Tsara Indrindra na BOBs  ny Deutsche Welle  any Alemaina. Nosokajiana amin'ny fiteny miisa folo samihafa ireo bilaogy vofidy. Mpanohana ofisialy ny Global Voices Online miaraka amin'ny Reporters Without Borders , re:publica 2010 , ny TV5  [fr], ny Al Arabiya  [ar], sy ny maro hafa  .
Tsy maintsy nikaroka izany tao amin'ny BOBs blogopedia  aloha ireo rehetra izay liana tamin'ny fanolorana ny bilaoginy ary nanolotra  ny bilaogy nosafidiany tao amin'ny angondrakitra fifanintsanana raha mbola tsy tao anaty lisitra ny bilaogy. Ny mpitsara  no nifidy ireo mpifaninana farany. Tao anatin'ity vondron'ny mpifaninana farany ity no hisafidianana ireo mpandresy nanomboka ny 15 Martsa ka hatramin'ny 14 Aprily 2009 tamin'ny alalan'ny fanambarana ireo vato an-tserasera sy ny fifantenan'ny mpitsara.
Nambara tao amin'ny fivoriambe Re:Publica Internet  tao Berlin ny 15 Aprily 2009 ireo bilaogy sy ny rakipeo nandresy. Natao tany amin'ny Zaikaben'ny Fampitam-baovao Manerantany Deutsche Welle ny volana Jona 2010 tany Bonn ny lanonana fanolorana ny loka.
Ho an'ireo bilaogera, ahafahana misarika mpanjohy marobe sy ho voafidy ho iray amin'ireo bilaogera tsara indrindra ao amin'ny habaka ny BOB. Tamin'ny fotoana nanoratana dia efa nisy bilaogy miisa 15.558 no nisoratra anarana ao amin'ny blogopedia  :
Tamin'ity fifaninanana ity, nasongadina ny lohahevitra momba ny fiovaovan'ny toetr'andro, niaraka tamin'ny sokajin'ny  loka manokana ho an'ny bilaogy sy ny rakipeo miresaka momba ity lohahevitra ity. Fanampin'izany, nanampy ny fiteny Bengali (Bangla) tamin'ny lisitr'ireo fiteny ihany koa ny BOBs.
Nendrasana fatratra ny mpandresy tamin'ity loka BOBs 2010 ity. Teto no nanolorana  ny bilaogy nankafizina indrindra !
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/09/27/126262/
 loka Best of the Blogs: http://www.thebobs.com/
 re:publica 2010: http://re-publica.de/10/
 Al Arabiya: http://www.alarabiya.net/
 maro hafa: http://www.thebobs.com/index.php?l=en&s=1152970399638128AQDBYRGA-NONE